တရုတ် GDPနှင့် စက်မှုထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်မှု
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းထားအဆင့်မှာ S&P ဂလိုဘယ်အဆင့်ဖော်ပြချက်များတွင် မကြာသေးခင်ကပင် အဆင့်လျောကျလာခဲ့ပါသည်. ထို့ကြောင့်ပင် ယခုထုတ်ပြန်မည့် "GDP နှင့် စက်မှုထုတ်ကုန်" ဒေတာကို ဈေးကွက်က အဓိကထားစောင့်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်. ယခုဒေတာကို အောက်တိုဘာ ၁၉ရက် ၀၅:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်.
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (GDP) သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ၇. ၃%, ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ၆. ၉%, ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၆တွင် ၆. ၇%ဖြစ်ရာ တိုးတက်မှုမှာ တဖြည်းဖြည်း နှေးကွေးကျဆင်းလာသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်.
တရုတ်ဒေတာအားကောင်းပါက AUDနှင့် NZDများပါ တန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်ပါသည်. ဒေတာအားပျော့ပါက အထက်ပါ ငွေကြေးအတွဲများအားပျော့နိုင်ပြီး ဂျပန်ယန်းကတော့ တန်ဖိုးမြင့်တက်သွားနိုင်ပါသည်.